‘सरकारको स्पष्ट पूर्वाधार नीति जरुरी छ’ – Arthik Awaj
‘सरकारको स्पष्ट पूर्वाधार नीति जरुरी छ’
By आर्थिक आवाज २०७५ आश्विन १४ गते आईतवार ०२:०२ मा प्रकाशित
पोखरा हार्डवयर एसोसिएसन
सञ्चालकः बाबा हार्डवयर एण्ड सेनिटरीवयर
पोखरामा बिगत लामो समयदेखि हार्डवयर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका दिलीपराज श्रेष्ठसँग हार्डवयर व्यवसायको अवस्था, समस्या, पूर्वाधार विकास लगायत विविध विषयमा केन्द्रित रहेर आर्थिक आवाजले गरेको कुराकानीः
हार्डवयर व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ?
अहिले तीन तहको सरकार गठन भएको छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकार बनेर मुलुक स्थिरता तर्फ अगाडि बढेपनि पूर्वाधार विकास, पुननिर्माण नवनिर्माणका कामहरु योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । निर्माण सामग्री व्यवसायीहरु उनीहरुले अपेक्षा अनुसार व्यापार नभएको अवस्था छ । सामान्य घर बनाउन तथा नियमित प्रक्रियाका विकासका कामहरु मात्रै भएका छन् । सरकारका ठूला विकास निर्माणका कार्यहरुमा प्रगति भएको छैन । निर्माण सामग्रीहरुको बिक्री बढ्न र बढाउनका लागि पनि सरकारको स्पष्ट पूर्वाधार नीतिहरु हुन जरुरी छ । हालको अवस्था हेर्दा बिगत ३ महिनादेखि निर्माण सामग्रीको व्यापार न्युन रहेको अवस्थामा अवका दिनमा नेपाल सरकार र निजी व्यवसायीसँगको साझेदारी, सहकार्यबाट मात्र देशको आर्थिक समृद्धिलाई चलायमान बनाउन सकिनेछ । बर्तमान अवस्थाको कुरा गर्नुपर्दा व्यवसायको गति कम भएपनि निराशा हुनुपर्ने अवस्था भने छैन ।
हार्डवयर व्यवसायीहरुले भोग्नुपरेका समस्याहरु के–के छन् ?
पहिलो समस्या ढुवानीको छ । यहाँका सडक तथा बाटाहरु साँघुरा छन् । गाडीबाट बाहिर निस्कने खालका लामा रडहरु, सिमेन्टबाट उड्ने धुलाहरुको कारणले व्यवसायीलाई निर्माण स्थलसम्म सामान ढुवानी गर्नका लागि केही समस्या छन् । ट्राफिकको समस्या पनि व्यवसायीले भोग्नुपरेको छ । यातायात मन्त्रालयको स्पष्ट नीति नभएका कारण ट्राफिकबाट यो वा त्यो बहानामा व्यवसायीहरुले सजायँ स्वरुप जरिवाना तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिन्छ । न्युन विजकीकरणका कारणले पनि व्यवसायीहरुले समस्या भोग्नु परेको छ । साथै बिलविजकहरु जारी गर्ने क्रममा न्युन विजकीकरणले पनि समस्या भोग्नुपरेको छ । यसका लागि सरकारले न्युनविजकीरकणको समस्यालाई सल्टाउन नीतिगत पहल गर्न आवश्यक छ ।
भविश्य अति नै राम्रो छ । तीन तहको सरकार बनिसकेको अवस्था छ । हाम्रो अपेक्षा भनेको अव सरकारले दु्रत गतिमा विकास निर्माणका कामहरु गर्न आवश्यक छ । पूर्वाधारहरुको विकासले मात्रै मुलुकको समृद्धि सम्भव छ । मुलुक समृद्धिको अभियानमा हार्डवयर व्यवसायीहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहन्छ । विकासका कामले जति गति लिन्छ त्यति नै यो व्यवसायको भविश्य राम्रो हुन्छ ।
निर्माण सामग्रीहरुको गुणस्तरको समस्या देखिने गरेको आरोप लाग्छ । के भन्नुहुन्छ ?
हार्डवयर व्यवसायीलाई न्युन गुणस्तरको मालसामग्रीहरु बेचे भनेर सरकारको निकायहरुले लगाउने आरोप सत्य होइन । सरकारले निर्यातकर्ता र देशभित्रका उद्योग कलकारखानाबाट उत्पादित सामग्रीहरु नेपाल गुणस्तर चिन्ह अंकित गराएर उपलब्ध गराएको अवस्था छ । निर्यातित र उत्पादित बस्तुहरु गुणस्तरीय छ वा छैन भन्ने कुरा सरकारका सम्बन्धित निकायहरुले अनुगमन गरी समय समयमा गुणस्तर जाँच गरी बजारमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । गुणस्तरहिन सामग्री आयात भएमा वा उत्पादन भएका सरकारले कारबाही समेत गर्नसक्नुपर्छ । केही व्यवसायीहरु पनि दोषी नहोलान् भन्न सकिन्न । यद्यपि, गुणस्तरहिन सामग्रीहरु व्यवसायीहरुको संलग्नातामा बजारमा जाँदैन भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
तपाईंको संयोजकत्वमा समितिको भवन बनेको छ । भवन बनाउनुको उद्देश्य के हो ?
आजभन्दा ३ वर्ष अगाडि हामीले भवन निर्माण गरेका हौं । भवन बनाउनुको मुख्य उद्देश्य भनेको यस क्षेत्रका निर्माण सामग्रीका उपभोक्ताहरुलाई सही सूचना सम्प्रेषण गर्नका लागि सूचना प्रविधियुक्त कार्यालय बनाउनु हो । सोही अनुसार भवनको प्रयोग पनि भइरहेको छ । भवन बनिसकेपछि हार्डवयर एसोसिएसनले आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवनमा कार्यालय राख्ने र गतिविधि सञ्चालन गर्ने अवसर पाएको छ । यो भवनको संरक्षण गरी भरपुर उपयोग गर्ने दायित्व निर्वाचित कार्यसमिति साथै एसोसिएसनमा आबद्ध सम्पूर्ण व्यवसायीहरुको रहन्छ । यस क्षेत्रमा गुणस्तरीय निर्माण सामग्री उचित मूल्यमा उपभोक्तासम्म पु¥याउनका लागि पनि आफूसँग आबद्ध व्यवसायीहरुलाई बेला बेलामा अनुगमन गर्ने कार्य कार्यालयबाट संस्थाले गर्दै आइरहेको छ ।
आजभन्दा २५ वर्ष अगाडि स्थापित यस संस्थाले यस क्षेत्रको सामाजिक विकासमा पनि ठूलो योगदान पु¥याउँदै आएको छ । साथै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सम्पूर्ण व्यवसायीहरुलाई यस क्षेत्रको विकास निर्माणमा लाग्नका लागि र उपभोक्तामैत्री वातावरण सिर्जना गर्नका लागि सम्पूर्ण हार्डवयर व्यवसायी मित्रहरुमा अनुरोध गर्दछु ।